Amathiphu Wokuthengisa Nge-Digital kusuka ku-Semalt Ukwandisa Imali Ehhotela Lakho
Imbonini yokungenisa izihambi idonsela amakhasimende ngendlela enambithekayo kanye nezintandokazi ezahlukene.Abathengisi abaningi embonini babhekana nezinqumo ezinzima bezama ukuhlaziya ama-buzz zakamuva noma amagama athandwayo njengokuthi "ukukhangiswa kokuqukethwe" noma "idatha enkulu".Kubangela abahlinzeki bamahholo ukuthi bahlanganyele emaqhinga anamandla futhi bacabange isabelomali sokumaketha ngenkathi besasebenzisa isikhonzi esenzakalelayo ukuphendulaizingcingo. Akulungile, futhi abahlinzeki bamahholo kumele babuyele ezisekelweni ngokugxila kulokho okuyizivakashi eziphawulekayo.
Yehla ezidingekayo zokuthengisa digital, enikeziwengu-Andrew Dyhan, iMenenja Yokuphumelela Kwekhasimende Semalt .
Thuthukisa isipiliyoni sokubhuka izivakashi - registro de dominio na argentina.
Isici esibaluleke kunazo zonke ekuthengiseni igumbi lehhotela kuyinto isipiliyoni sokubhuka izivakashi.Ngokusho kweStatistic Brain, ukubhuka kwamahhotela angu-58 kuvele ku-intanethi. Kuyinani eliqinekayo. Ikhasi eliyisiqalo lewebhu lasekhaya libalulekileisici sokubhuka kwe-intanethi. Okumangalisa ukuthi amawebhusayithi amaningi amawebhusayithi amawebhusayithi ayinzima ukuhamba futhi enze izivakashi zisebenze kanzimabhala ikamelo. Abantu akufanele bachofoze ku- "izinsiza" noma "izindawo zokuhlala" futhi ulinde amahora ngaphambi kokuba ikhasi lilayishe. Ukwengeza, iikhasi eliyisiqalo elihle lehhotela kufanele libe nezigaba lapho isivakashi singakwazi ukupheqa futhi sithole ulwazi olubalulekile ngaphambi kokubhuka izinsizakalo. Izivakashibefuna ukubona amakamelo, izilinganiso, ubufakazi kanye nebhokisi lokubhuka. Ukusebenzisa uhlelo olusebenzayo lwe-SEO kungasiza ekuthuthukiseni lokhu okuhlangenwe nakho.
Funda iqiniso nge-SEO embonini yezihambi.
Amahhotela aphakathi kwabokuqala bokuqala imisebenzi ye-SEO kusukela ngo-2004. Ngaleso sikhathi,isayithi lehhotela lingafaka amagama angukhiye kuphela ngaphakathi kwamathegi angabonakali ekhasini lokuqala kanye nezinjini zokusesha ezifana ne-Google ezizokhomba amagama angukhiye ambalwaizinyanga kamuva. Noma kunjalo, konke manje sekuguqukile, futhi izinkomba ze-Google algorithm zibonisa kusayithi zingakapheli izinsuku. Ukwengeza, i-Google isebenzisaI-RankBrain, i-intelligence yokufakelwa ukufaka ngokunemba okucacile kokubikezela. Kusho ukuthi amabhizinisi anezilawuli ezingaphansisesha izikhundla. I-SEO ingaphansi kakhulu komsebenzi, futhi ama-hoteliers angakwazi manje ukushintsha isabelomali se-SEO kwezinye izindlela zokumaketha zedijithali njengezindaba zenhlalo.
Qaphela ukuxhumana phakathi kwezindaba zenhlalo nokubambela.
Kule ndaba, abaningi abahlinzeki bamahholo baye babanjwa ngenxa yesisindo esisheshayoyimiphi imithombo yezokuxhumana efana ne-Snapchat ne-Facebook iqhubeka ikhula. Kuwukuhlakanipha ukuthi abahlinzeki bamahholo baqonde imithombo yezokuxhumana engcono kakhulu ukuyisebenzisa kudijithaliukumaketha. Mhlawumbe, kufanele futhi kube nengxenye ekuthuthukiseni isipiliyoni se-SEO. Ochwepheshe futhi abonisa ukuthi ama-hoteliers kumele atshale ekudaleni amavidiyokusukela ku-67% wemikhiqizo ehambelanayo yokuvakashela izivakashi ngaphambi kokubhuka igumbi. Amavidiyo futhi anika abahambi ngomqondo ongcono weqiniso.
Yamukela i-Instagram ne-Facebook.
Akunakwenzeka ukuba kube yilowo nalowo yesikhulumi sezokuxhumana, kodwa amahholokufanele kube kulababili. Amakhasimende amasha athembele kulezi zingxenyekazi ukuze anqume ukuthi ihhotela ngalinye lisasebenza yini ekulethwa kwezidingo.
Ukwandisa inani labalandeli.
Abaningi bamahhotela ababazi ababalandeli babo. Ukuba nabalandeli abangamakhulu ambalwa abakwazikhuthaza ukumaketha kwe-digital embonini yezihambi.
Nika izinsiza ezizinikezelwe kumithombo yezenhlalo.
Imithombo yezokuxhumana iyisiteji esidinga amahholo ukuba atshale ngokuqasha ochwepheshe.Kufanele babe nomqondo wesitayela, ukufaka uphawu lokukhangisa, nokuhleka usulu ngaphezu kwamakhono namakhono wokwakha.